Fahalalana ilaina ho an'ny ankizy mararin'ny diabeta-Lahateny diabeta-fitsaboana Sinozika
Fahalalana ilaina ho an'ny ankizy mararin'ny diabeta
Fotoana: 2020-04-10 Hits: 199
Ny zanaky ny mararin'ny diabeta dia tokony hianatra ireto fahalalana fototra manaraka ireto:
1. Tsy sitrana vetivety ny diabeta. Aza mino ny fampielezana dokotera miafina razana, andrim-pitsaboana iraisam-pirenena mandroso indrindra ary vokatra ara-pahasalamana tsy fantatra. Azafady mba tadidio ity!
2. Tsy mampiankin-doha ny insuline. Raha toa ka omen'ny dokotera dokotera insuline satria avo lenta ny glucose ao anaty rà dia tsy tokony hankahala an'ity dokotera ity ianao satria afaka manalefaka ny poizina hyperglycemic amin'ny alàlan'ny fitantanana insuline ara-potoana. Raha omena ara-potoana araka izay azo atao ny insuline dia mety esorina izany. Na izany aza, ny fialan'ny insuline dia tsy midika hoe sitrana ny diabeta, fa kosa mampiseho fa salama ianao mandritra io fotoana io.
Raha misy fanafody natolotry ny dokotera ho an'ny ray aman-dreninao, dia tsy vitan'ny hoe tokony homena hentitra araka ny baikon'ny mpitsabo izy ireo, fa ny vokany koa tokony hojerena amin'ny fanaraha-maso akaiky ny glucose ao amin'ny ra. Raha tsy mahatratra soatoavina mahazatra ny haavon'ny glucose amin'ny ra, dia tokony hifampiresaka ara-potoana amin'ny dokotera ianao satria tsy andriamanitra ny dokotera ary indraindray tsy mahita fanafody mandaitra hanasitranana ny aretina. Raha mifampiresaka matetika amin'ny dokotera ianao dia afaka manampy ny dokotera hahita vahaolana haingana araka izay tratra.
3. Rehefa voafehy tsara ny glucose amin'ny ra, dia afaka mihinana sakafo ianao, nefa mbola tokony hifehy ny habetsahan'ny fatrany.
4. Ny fampihetseham-batana dia fomba tsara hifehezana ny glucose amin'ny ra. Ny fivoaran'ny fahazarana manao fanatanjahan-tena tsara dia afaka manatsara kokoa ny tsimatiman'ny vatana ary manampy amin'ny fifehezana ny glucose amin'ny ra. Aza mahatsiaro ho sosotra amin'ny fanazaran-tena, ary manaova fanatanjahan-tena fotsiny.
5. Amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny glucose amin'ny ra, ny tahan'ny glucose ao amin'ny ra dia tsy azo ahena, fa azonao atao ny mamantatra raha mitombina ve ny fanafody sy ny sakafo ankehitriny
Mba hanampiana ny ray aman-dreny voan'ny diabeta hifehy tsara ny glucose amin'ny ra, ny zanany dia afaka manao ireto zavatra manaraka ireto:
1. Mividiana boky diabeta na manorata magazine ho an'ny ray aman-dreninao. Boky diabeta maro no hita ao amin'ny Internet, toy ireo nosoratan'i Prof. Yang Wenying, Prof. Xiang Hongding ary Prof. Wang Jianhua. Mora takatra sy azo ampiharina ireo boky ireo; ary izy ireo dia afaka manampy ny ray aman-dreninao hahafantatra ny fahalalana fototra indrindra amin'ny fifehezana ny glucose amin'ny ra. Na azonao atao ny manoratra karazana fahalalana toy izany ho an'ny ray aman-dreninao.
2. Ampio ny ray aman-dreninao hanana fahazarana manao fanatanjahan-tena tsara amin'ny fanomezana azy ireo fitaovana fanatanjahan-tena, toy ny kiraro fanatanjahan-tena, rakotra badminton, palitao / pataloha ary fanatanjahan-tenan'ny latabatra.
3. Raha tsy tian'ny ray aman-dreninao ny biby dia afaka manome alika ny ray aman-dreninao ianao. Rehefa mandehandeha ny alika ny ray aman-dreninao amin'ny maraina dia afaka manangana vatana tsara kokoa izy ireo ary ny fanenenana fa tsy afaka miaraka amin'izy ireo ianao dia ho sitrana, satria manana namana iray hafa izy ireo (fahatsapana mampalahelo tokoa).
4. Vidio ho an'ny ray aman-dreninao ny setrin'ny metatra glucose ao amin'ny ra sy ny tosi-dra. Amin'ny alàlan'ny metatra glucose ao amin'ny ra dia manampy ny ray aman-dreninao hianatra ny haavon'ny glucose ao amin'ny ra sy ny fahalalana raha ampiasaina tsara ireo fanafody ireo na raha marina ny sakafo. Tokony hividy metatra fihenan'ny tosidra ho an'ny ray aman-dreninao koa ianao, satria ny hyperglycemia sy ny hypertension dia aretina mpiray tam-po aminao ary zava-dehibe ny fanaraha-maso ny tosidra sy ny glucose amin'ny ra. Satria tsy dia lafo loatra izy ireo, dia azonao atao ny mividy azy ireo amin'ny fisorohana ny fisakafoanana any ivelany fotsiny.
Ireo teboka 4 etsy ambony dia mampifandray ireo tena zavatra tokony hovidinao ho an'ny ray aman-dreninao. Aza mijery ny manodidina ny inona ny vokatra ara-pahasalamana afaka mampihena ny haavon'ny glucose amin'ny ra, satria ny haavon'ny glucose amin'ny rà dia tsy azo ahena amin'ny vokatra ara-pahasalamana; raha mino azy ireo ianao dia azo antoka fa tsy mendrika amin'ny fandoavanao izy ireo. Zavatra ambony 4 no mandaitra lavitra noho ny vokatra ara-pahasalamana.
5. Raha ao an-trano ianao dia afaka miaraka amin'ny ray aman-dreninao bebe kokoa mandeha an-tongotra aorian'ny sakafo hariva. Raha tsy ao an-trano ianao dia tokony andefasanao telefaona bebe kokoa. Indrindra fa rehefa voamarina fa diabeta fotsiny, dia marefo ny ray aman-dreninao, ary ilaina ny famporisihanao ny saina, toy ny nikarakaran'izy ireo anao fony ianao narary tamin'izany fotoana izany. Inona no tsy mampitovy anao, rehefa narary ianao dia niaraka taminao ny ray aman-dreninao tontolo andro sy alina; na izany aza, rehefa marary izy ireo amin'izao fotoana izao dia tsy miaraka aminy ianao (fahatsapana mampalahelo iray).
6. Raha tsy mandrindra ny ray aman-dreninao dia tsy tokony hampianatra azy ireo foana na hanome tsiny azy ireo akory ianao. Rehefa tsy mifandrindra amin'ny fifehezana glucose amin'ny ra ny ray aman-dreninao, amin'ny ankapobeny, tsy tena misalasala izy ireo, fa manana scrubles be dia be, toy ny fandoavana vola be loatra, tahotra ny fahasarotana ary amin'ny toe-tsaina ratsy. Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mieritreritra amin'ny toerany bebe kokoa momba ny tena hevitr'izy ireo ianao.
Pejy mialoha: Antony telo mety hisian'ny fifadian-kanina amin'ny fitsapana glucose Plasma> 7 mmol / L
Pejy manaraka: Torohevitra fito lehibe tokony hatao aorian'ny fijaliana diabeta